Okufanele ukwenze ngemuva kokufaka iSlackware? Umhlahlandlela osheshayo futhi olula | Kusuka kuLinux
Okufanele ukwenze ngemuva kokufaka iSlackware? Umhlahlandlela osheshayo futhi olula
petercheco | | Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Sanibonani bangani abavela kwaLinux, ngemuva kwesikhathi eside bengathumeli lutho, nakhu sebenami futhi. Namuhla ngizokukhombisa ukuthi ungayilungisa kanjani iSlackware yethu ngemuva kokuyifaka.
1 Kungani usebenzisa iSlackware?
2 Ngikulanda kuphi?
3 Okufanele ukwenze ngemuva kokufaka iSlackware?
3.1 Faka umsebenzisi omusha:
3.2 Nika amandla i-Sudo kumsebenzisi wethu:
3.3 Humusha uhlelo luye kusi-Spanish:
3.4 Lungiselela amakhosombe:
3.5 Buyekeza uhlelo:
3.6 Qala uhlelo ngqo kumodi yokuqhafaza:
3.7 Shintsha ukulinda kwe-lilo kusuka kwimizuzu emibili kuye kumasekhondi amahlanu:
3.8 Uwafaka kanjani amaphakheji nge-sbopkg…?
3.9 Uma sisebenzisa incwajana:
3.11 Amathuluzi okucindezela:
3.13 Endabeni yokusebenzisa isistimu engu-64 bit:
3.16 Humusha i-Libreoffice:
3.17 I-32 bit:
3.18 I-64 bit:
3.23 Imenyu entsha yokuqalisa ye-KDE uma unentshisekelo (njengasesithombeni):
Kungani usebenzisa iSlackware?
Hhayi-ke wonke umuntu uyazi ukuthi kuzoba ngaphezu kwezinyanga ezinhlanu ezedlule ngenza ushintsho lwe- Debian a vulaSUSE kuyo yonke imishini yami kufaka phakathi amaseva wami. Manje ngenze okufanayo njengoba bengizitshela .. Uma i-openSUSE iphumile SUSE futhi lokhu kwavela kuSlackware .. Izoba njani iSlackware? Futhi nginqume ukuyizama :).
Kwakunenjabulo yami ukuthi bengingakwazi ukuqukatha umzwelo futhi noma ngabe umuntu kufanele adlale kancane ngeroll of slackpkg, ukufaka, sbopkg kanye newebhusayithi yeSlackbuilds, kuyacaca ukuthi kufanelekile ngoba sifeza ukusebenza esingeke sikubone nakuyo Debian, Fedora, RHEL, SUSE, Arch, njll ...
Okuwukuphela kwe-distro ekhombisa ukusebenza kwayo yi-Gentoo futhi lokhu akunazikhathi zokuhlanganiswa nokufakwa okude kakhulu, kuyilapho iSlackware ifakiwe ngemizuzu engama-20 (kuya ngesoftware esiyikhethayo): D.
Indaba yami ... indaba kaDebian, ubaba weLinux, engimkhonze iminyaka eminingi futhi engadlula kuye ngabafowethu beRHEL kanye nenzalo yabo, futhi kamuva yindodakazi yegatsha elizimele ngokuphelele elivulekileSUSE likamama SUSE elangivulela indlela eya ezweni elingakaze libonwe. Umama wokusabalalisa kweLinux .. I-Slackware: D.
Umgwaqo omude ungiholele ezweni elibizwa ngeLinux ngeqiniso. Umhlaba obukeka ufana ne-Unix. Umhlaba lapho kuhlanganiswa khona amaphakheji. Izwe lapho amaphakheji we-junk angafakwa lapho ufuna ukufaka uhlelo lokusebenza ngoba sidinga kuphela ukuncika kwabo kuphela. Izwe lokuzinza. Umhlaba ongenayo i-versiontitis ne-dystrotitis.
Noma kunjalo, le distro ingeyamanje, ivuselelwa ngezikhathi ezithile .. Ukunikeza isibonelo: I-Slackware 14.1 Iphume ngo-7.11.2013. Sonke siyazi ukuthi kwenzekeni muva nge-OpenSSL futhi sonke siyazi ukuthi ama-distros amakhulu anamathele izinhlobo zawo ze-OpenSSL. Endabeni kaDebian noma i-RHEL, bamatanisa izinhlobo zabo i-1.0.1e. I-Slackware 14.1 Iphinde yaphuma nale nguqulo, kepha lapho ithola le bug, ikhethe ukubeka inguqulo 1.0.1g ngqo egatsheni elizinzile. Le distro ikhetha ukubeka inguqulo esemthethweni esikhundleni sokwenza ama-patches angadala izimbungulu eziningi.
Kungakho ngigcine iSlackware kuyo yonke imishini yami namaseva futhi ngihlela ukuhlala lapha. Kulezi zinyanga bengilokhu ngivivinya le distro kakhulu, ngokujulile kakhulu ukwazi ukuthi ngabe lesi sinyathelo silungile. Impendulo ithi yebo .. Umama yebo
. Le distro inginqobile, yangikhanga ngokuphelele futhi ngaphandle kokungabaza kuyinto engcono kakhulu engizamile. Anginawo amanye amagama.
Ngaphandle kokuqhubeka, ezinye izithombe zesistimu yami:
Angizukuya ekutheni ngikwenze kanjani ukufakwa uqobo ngoba kulula. Isifaki semodi yombhalo, kepha siyasiqondisa igxathu negxathu.
Okufanele ukwenze ngemuva kokufaka iSlackware?
Faka umsebenzisi omusha:
Ngesikhathi sebhokisi elivela lapho lokhu kuvela:
cindezela ukhiye wokuya phezulu kumakhibhodi akho futhi ekugcineni kolayini weqembu ophothulwe ngokuzenzakalela ngokufaka ukhiye oshiwo: Isondo bese ucindezela faka.
Nika amandla i-Sudo kumsebenzisi wethu:
Sigcina idokhumenti nge-CTRL + O bese siyivala nge-CTRL + X.
Humusha uhlelo luye kusi-Spanish:
Bhala zonke izilimi ezitholakalayo: indawo -a
Ukuthekelisa okuthe xaxa LANG = en_US:
Faka esikhundleni setenv LANG en_US:
Uncomment izixhumanisi zasePortugal ngoba iSpain ayinayo indawo yokuphumula:
buyekeza i-slackpkg buyekeza i-gpg slackpkg thuthukisa konke
Qala uhlelo ngqo kumodi yokuqhafaza:
Shintsha i-id: 3: initdefault: to:
Shintsha ukulinda kwe-lilo kusuka kwimizuzu emibili kuye kumasekhondi amahlanu:
Faka okunye esikhundleni = time 2000:
Manje sifaka ithuluzi eliwusizo kakhulu, elizohlanganisa futhi lisifakele izinhlelo:
Sibuyekeza i-database yezinhlelo ezitholakala kuSlackbuilds.org:
Uwafaka kanjani amaphakheji nge-sbopkg…?
Siqinisekisa ukuthi iphakethe liyatholakala ku-http: //slackbuilds.org/ futhi siphawula konke ukuncika.
Ngemuva kwalokho vele ugijime: sbopkg -i "slim" (Kuyisibonelo sokufaka okuncane). Ungakhohlwa ukuthi ngaphambi kokufaka iphakheji esifuna ukuyifaka sibeka konke ukuncika kwayo. Manje sifaka izinhlelo eziyisisekelo:
Uma sisebenzisa incwajana:
i-sbopkg -i "orc texi2html libebml libmp4v2 libcuefile libreplayplay gain x264 a52dec faad2 speex twolame lua lua lua portaudio libass libavc1394 libdc1394 libdca libdvbpsi libdvdcss libdvdp libdp lib libpdv libpod lib libros
Endabeni yokusebenzisa isistimu engu-32 bit:
Landa i-jdk kusuka ku-oracle enguqulweni yayo engu-7u51 (jdk-7u51-linux-i586.tar.gz):
Namathisela ifayela jdk-7u51-linux-i586.tar.gz kufolda ye-jdk esiyivule ekuqaleni futhi sisebenzisa iskripthi:
Lokhu kuzokwakha iphakeji elifakekayo elifana nale (uhlala ubona indlela negama lephakeji elenziwe) futhi silifaka nge:
Endabeni yokusebenzisa isistimu engu-64 bit:
Landa i-jdk kusuka ku-oracle enguqulweni yayo engu-7u51 (jdk-7u51-linux-x64.tar.gz):
Namathisela ifayela jdk-7u51-linux-x64.tar.gz kufolda ye-jdk esiyivule ekuqaleni futhi sisebenzisa iskripthi:
Landa i-libreoffice-helppack ne-libreoffice-langpack slackbuilds:
Sivula iziphu amafayela alandiwe.
Silanda amaphakheji e-libreoffice:
Sinamathisela lawa mafayela ngaphandle kokuncipha kumafolda e-slackbuid ahambisanayo bese sisebenzisa iskripthi kukho kokubili:
Futhi sifaka amaphakheji akhiqizwayo (uhlala ubona indlela negama lephakeji elenziwe):
I-ARCH = x86_64 ./libreoffice-helppack.SlackBuild ARCH = x86_64 ./libreoffice-langpack.SlackBuild
Yivule uziphu ngaphandle kokuyifaka, singayisebenzisa ngokwenza iphakheji yokubheka iqembu kule folda.
Sifaka iphakheji ohlwini lokuqala:
Sibhala lokhu ekugcineni:
uma [-x /etc/init.d/ufw]; bese /etc/init.d/ufw qala fi
Sivumela i-ssh uma siyisebenzisa:
Imenyu entsha yokuqalisa ye-KDE uma unentshisekelo (njengasesithombeni):
Futhi i-voila .. Ngalokhu bathola uhlelo olulungiselelwe ukusetshenziswa okujwayelekile: D. Futhi uyabona ukuthi akunzima njengoba kungabonakala. Ama-linuxeros wokubingelela futhi ungakhohlwa ukuphawula :).
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Okufanele ukwenze ngemuva kokufaka iSlackware? Umhlahlandlela osheshayo futhi olula
Amazwana ayi-96, shiya okwakho
Futhi (i-vector linux) ifana nobumnandi beSlackware
Yebo kodwa akufani 😀
Ngivele ngathi sawubona =) ...
I-Slackware ngeke ibe nobaba kepha ngicabanga ezinyangeni ezimbalwa ukuthi uzame i- "linux kusuka ekuqaleni", nokuthi ushintshe yonke imishini yakho namaseva ... ngesiqondisi esihambelanayo 😉
Angikucabangi ukwenza into engasile kanje: Bengicabanga ngakho phakathi kweSlackware neGentoo. Ngasuka kubaba kaDebian ngaya kumama weSlackware futhi nakhu ngihlala impela: D.
Bheka isikhathi sokusekelwa izinguqulo zeSlackware ezinaso:
Ngicabanga ukuthi ilungele ukusetshenziswa ekukhiqizeni.
I-Debian uhlelo lwami lokusebenza oluhloniphekile futhi oluhloniphekile engingabaza ukuthi ngolunye usuku luzosuswa kukhompyutha yami ... Umqondo wokufaka i-slackware nawo wawela emqondweni wami kudala, kepha lapho ngizama kwaba ngesikhathi lapho ngangingaziqondi ezinye izinto futhi indlela yaba nzima kimi kanjalo khipha lo msebenzi ... Njengoba usho, uGentoo uthatha ("okuncane") kepha kuzokuba ngemuva kwesikhathi ...
Noma kunjalo, ukuphawula kuhle kakhulu nge-slackware, ngithemba ukuqhubeka nokufunda kabanzi ngakho nezinqubo ezilukhuni ngezixazululo ezivela endleleni ...
ISlackware ukusatshalaliswa engikucabangile ngokukufaka kaningana, ngifunde imibono ukuthi yiyona ezinze kakhulu (kepha empeleni). Impela, ngingamangala uma ngabe ibinezimbungulu ezimbalwa kune-CentOS, enginike izingqinamba ezi-0 ngesikhathi engizama ngayo.
Kodwa-ke, ngihlala ngibuyela entweni efanayo: amaphasela angaphandle. Iqiniso lokuthi ukukhishwa kukaDebian ngokuzinzile ngamaphakeji aphelelwe yisikhathi akuyona into ethandwayo, kungenxa yokuthi inkululeko yeGNU / Linux kanye nemitapo yolwazi yendawo yonke ibangela ukuthi izingxabano phakathi kwezinhlelo zingavela, futhi kudingeka isikhathi nesikhathi ukuze kutholwe. Isiqiniseko seSlackware sisebenza kahle kakhulu ngokupakisha kwayo okusemthethweni kepha iSlackbuilds ayifanele, ngamaphakheji okungenzeka ukuthi awahlolisiswanga kahle nokuthi uma isikhathi sifika bangabambeka. Uma ngabe nakuDebian kwenzeke kimi ngamaphakeji amaningana, anginathemba lokuthi iSlackbuilds ngeke ikwenze. Ngakolunye uhlangothi, ngephasela langaphandle kunenkinga yezokuphepha: uma kutholakala iphutha, ingabe bazoyibuyekeza? Mhlawumbe yebo, kepha kuhlala kunezinhlelo ezishiywayo (noma abalaleli bezilahla), lapho azizinhle kangako. Kuyinto engihlupheke kuyo kuCentOS: akunankinga ngemuva kweviki lokusetshenziswa (i-ONLY distro lapho kwenzeke into enjengale kimi futhi ngiyisho, ngayo yonke into kukhona obekulokhu kuvela njalo), kepha-ke sekuyisikhathi sokudonsa izinqolobane zangaphandle lapho Uhlelo oluphakathi luqine kakhulu kepha izinhlelo ozozisebenzisa ngeke zikuqinisekise ngalutho. Isibonelo, iSlackware ayinalutho ongalwenza (i-LXC okungenani), kuzofanele uye eSlackbuilds ukuyithola.
Ngabe ukufanele ngempela ukushiya uDebian ngemuva bese wenza ushintsho ngokuzidela okunjalo, i-petercheco?
Sawubona OtakuLogan futhi ngiyabonga ngamazwana akhiqizayo: D. Ngiyavuma ukuthi ukuzinza kwe-Debian noma i-RHEL / CentOS kusezingeni eliphakeme kakhulu. Ngidlule kuma-distros amabili owakhulumayo futhi ngingasho ukuthi noma nini lapho usebenzisa i-repo esemthethweni uqinisekile ukuthi i-99% akukho okuzokwenzeka kuwe. Vele, uma ufaka i-rpmfusion, i-adobe ne-epel repos ku-CentOS yakho, izinto ziyashintsha kakhulu. Hhayi kuphela ngenxa yamaphakeji ozowafaka kusuka kulawa ma-repos, kepha futhi nangenxa yamaphakeji okungenamsoco abakufakela wona kanye nezikhala ezingaba khona.
Nge-slackbuilds le ndaba yehluke kancane ngoba uyazi ukuthi yimaphi amaphakheji nokuncika ozokufaka nokuthi awusoze ufake iphakethe elingadingeki ukwenza noma yimuphi umsebenzi wesoftware ofuna ukuyifaka nge-slackbuilds. Futhi khumbula ukuthi ama-slackbuilds asebenza nekhodi yomthombo futhi ahlanganisa iphakheji kusistimu yakho. Kufanele futhi ukhumbule ukuthi kuphela izinhlobo ezizinzile zamaphakeji namaphakeji ahloliwe ashicilelwa kuma-slackbuilds. Isibonelo: I-VLC ekhasini elisemthethweni iyatholakala ngohlobo 2.1.3 ngenkathi kuma-slackbuild inguqulo yayo ingu-2.1.1. Mayelana nokuntengantenga kohlelo .. Uma ubheka ukuthi amaphakheji ahlanganiselwe ikhompyutha yakho, lokhu kwehlisela ku-0 ukungazinzi kwe-pc yakho ngoba noma kunjalo ukungazinzi kuzothinta uhlelo uqobo. Ngincoma ukuthi wenze ukunambitheka okuncane kwe-Virtualbox futhi uzobona ukuthi yiziphi izinzuzo le distro enazo.
Ngiyakutshela nokuthi nami benginombono ofana nowakho ngaphambi kokuzizamela iSlackware: D.
Ngiyabingelela Linux futhi ngiyethemba ngiyiphendulile imibuzo yakho 🙂
Woza, kungenze ngafuna ukubuyela kuslackware.
Ngingathanda i-slackware ukufaka ukuncika futhi igoqeke, kepha hhayi yonke into ingaba yi-haha. Kepha ngincamela i-slackware kune-debian noma i-gentoo.
Yebo, ukuyibuyisela kuthiwe .. ISlackware inayo igatsha lamanje futhi usunayo igingqa 🙂
Ngalokho kukhona i-Arch, iyagoqeka futhi nge-ABS ne-PKGbuilds ungenza ngokufana ncamashi ne-Slackbuilds futhi uma ufuna ngomyalo "makepkg -s" nami ngizoxazulula ngokuzenzakalela ukuncika.
Ngokwalokho engikubonayo, nginamathela ku-Arch Linux, ngaphandle kokuthi ungangitshela okuthile iSlackware enakho maqondana ne-Arch, ngoba kuze kube manje angikaboni
bonke banomusa wabo…. lapho ukhathala kokunye, bese ushintshela kokunye nokunye haha
Usebenzisa amawindi 7 futhi ayihambi haha
Impendulo yakho iyathakazelisa kakhulu, petercheco. Ngikucabangela, okungenani ngizolandela umhlahlandlela wakho wokuwuhlola ubonakale. Ngiyabonga!
Umhlahlandlela omuhle kakhulu, kuzofanele sizame. Ngokwalokho okushoyo ngicabanga ukuthi ngaphambi kokufaka iphakheji kufanele ubheke ukuncika ngakho-ke lapho ufaka amaphakheji kuzofanele ufake ukuncika. Kuzofanele ngibhekisise. Kubonakala kimi isitayela se-Bsd kakhulu kune-linux ... Ngiyabonga 🙂
Ngempela. Kufanele ufake konke ukuncika ngaphambi kohlelo uqobo. Ubuhle bukhona nge-sbopkg ngoba uyifaka konke kokukodwa .. Isibonelo: Bheka umyalo wokufaka i-VLC. Konke ngaphambi kwe-vlc (ngomyalo ofanayo) kuncike ku-VLC noma ezinhlelweni ezidinga i-VLC. Ngamanye amagama, utshela i-sbopkg ngomyalo konke ukuncika nohlelo lokugcina ekugcineni futhi inakekela ukulanda, ukuhlanganisa nokufaka iphakethe ngalinye ngokwalo. Ihamba ngephakeji kuze kube kwenziwa konke. Futhi uma iSlackware isondelene kakhulu ne-Unix 😀
Kufanele uhalaliselwe ngoba usebenzisa iSlackware futhi ngoba cishe akukho okuthunyelwe okuvela kuye. Yize kubonakala kimi ukuthi unehaba ngokusebenza. Ngokombono kufanele kube nokuningi, kepha akuyona into ephawuleka kangako. Futhi ngiyakutshela ukuthi ngisebenzise i-Arch neSlackware ngasikhathi sinye. Lapho kuphawuleka khona kuseGentoo, ikakhulukazi i-KDE iyangimangaza.
Yize ngiyaqonda, nami benginalowo muzwa wokusebenzisa kakhulu futhi muhle kakhulu. Kepha akuhambisani nesitayela sami seSlackware, ngibe nesithukuthezi ngakhohlwa ngakho, kunalokho ngikuthanda kangcono ukuthi konke kwenziwa kanjani eGentoo.
I-Gentoo kulula kimi ukuthi ngiyisebenzise, ​​mhlawumbe idinga ukuhlaziywa okwengeziwe okusetshenziswayo, kepha kuncane kakhulu. Uma singacabangi ngokufakwa.
Ngiyabonga kakhulu: D. Ngiphinde ngikuhalalisele ngokusebenzisa iGentoo futhi ngivumelana nawe ukuthi kulula kakhulu ukukugcina ukubonga okufakiwe lapho kufakwe: D. IGentoo iyangikhanga ikakhulukazi kepha ukufakwa kweGentoo kuhamba kancane futhi angikutsheli lutho ukuthi uhlanganise yonke i-KDE kufanele ubekezele kakhulu: D. Ngokuqondene nokusebenza, angikwazi ukuphawula njengoba ngenze ukukhetha okukhethiwe kwamaphakeji ngesikhathi sokufakwa, ngakho-ke nginezicelo kuphela ebenginentshisekelo yokuba nazo futhi njengendawo engiyifakile kuphela i-KDE. Umuzwa enginawo kwi-laptop yami enomgogodla kanye negig yenqama ukuthi iSlackware ene-KDE isebenza kakhulu, ngokushesha okukhulu futhi umehluko wale distro neDebian, Arch, openSUSE kimi uphawuleka kakhulu: D. Ngicabanga ukuthi kuya ngehadiwe lapho umuntu kufanele abone ngokungaphezulu noma ngaphansi umehluko we-distro ngayinye.
Nami ngiyabonga. Manje njengoba ngicabanga ngakho, ukufakwa okuncane kwe-KDE ku-Debian noma i-Arch kuyakuphoqa ukuthi ufake amaphakheji aphoqelekile. Ngakolunye uhlangothi, kuSlackware ungazinaka eziningi ngoba azizidingi. Ifana ne-Gentoo, inokufakwa oku-3 okuhlukile kwe-KDE, okugcwele, okuyisisekelo, nokukhanya okukhulu ngaphandle kwezengezo ezingadingekile. Engikhethe kuyo eyokugcina. Kuhle kakhulu.
Ku-PC yami ene-Debian Wheezy ene-1GB ye-RAM kanye ne-2.8 Ghz Pentium D, okokuqala, ngafaka iphakethe le-KDE-Meta ngikhetha okuyisisekelo kunazo zonke ukusebenza; Ngemuva kwalokho, ngiqhubeke nokushayisa i-GNOME 3.4 uqobo ngenkathi ngikwideskithophu ye-KDE, futhi impela, ngikhululekile nge-KDE yami kwi-PC yami yedeskithophu.
NgeSlackware, ngivivinye ukusebenza kwayo kumshini obonakalayo ne-KDE, nazo zonke izinto zayo, isebenza ngokoqobo njengosilika. Kuyisimangaliso se-GNU / Linux distro futhi kuyinto engingazisoli ngokuzama ngayo.
Futhi, iSlackpkg ikunikeza inkululeko yokukhetha ukuthi ikuphi ukuncika ofuna ukukufaka kwiphakheji kanambambili (i-APT nePacman abangayiboni).
Yebo, ukusebenza kuyabonakala, futhi okuningi. Konke kuketshezi kakhulu. Ukukunikeza isibonelo, ama-Slackware 64bits ami ane-XFCE desktop akhombisa ukusetshenziswa kwe-245mb ye-RAM ngemuva kokubamba. Ku-OpenSuse noma i-Fedora enedeskithophu efanayo ukusetshenziswa okungaba ngu-354mb (kususwe izinqubo ezithile kusukela ekuqaleni).
Ngakolunye uhlangothi, angincomi noma ngubani ukuthi asebenzise izinqolobane zamanje, ngoba kujwayelekile ukuthi ngemuva kokubuyekezwa okuthile kungakusebenzeli noma kumane kungaluqali uhlelo. Isikhathi sokugcina ukwenzeka kimi, i-GDM yayeka ukusebenza (bekufanele ngisebenzise i-Ctrl + high + F1 ukuqala i-startx bese ngishintshela ku-Slim), Gedit, Viewnior nakwezinye izinhlelo eziningi.
Mnu. Isikebhe kusho
UPeter olungile, okokuqala ngiyabonga ngomqondisi.
Kufundwa yonke into ngesinyathelo ngithole incazelo kuzo zonke izinyathelo ngaphandle kweyodwa:
Kungani lokhu, kuya ngegooglecode.com, lapho singafaka i-dbopkg 0.37 kuma-repos asemthethweni ngokusho kwewebhusayithi yephrojekthi?
Ngokwenza ngenye indlela, asizibeki engcupheni yokuphelelwa yisikhathi ngakusasa?
Phendula uMnu. Isikebhe
Sawubona, kuyathakazelisa ukuthi ubeka ini kodwa ekhasini elisemthethweni leSlackware kuza lokhu:
Ezimpumulweni ezisemthethweni ze-distro akuyona ngqo :).
Into enhle kabi leyo, kungenzeka kanjani ukuthi bengakalilungisi iphutha elikhulu kangaka ku- http://www.sbopkg.org/downloads.php?
Siyabonga ngempendulo esheshayo.
Benginokunye engingakutshela khona, yize ngicabanga ukuthi sengivele ngiyayazi impendulo yalokho. Esinye sezizathu esangenza ngashiya i-Arch ukuthi yayingenzanga lutho ngaphandle kokuthola izinkinga zokuphepha yonke indawo, futhi angithandanga ukuba ngibe ngungoti kwezokuphepha kwamakhompyutha ukuze ngikwazi ukumisa imingcele ethile kokunye ukwabiwa esivele ikhona beza kimi ngokwakhona.
Kwenzeka okufanayo ngeSlackware, ngicabanga, azikho izindlela zokuphepha kusuka kuminithi 1, akunjalo?
Kufanele uzilungiselele ngokwakho.
Angicabangi ukuthi kufanele wenqabe ukungenelela okufana ne-Arch, ngoba, kwisifaki esifanayo seSlackware, sikunikeza indawo yokufaka i-SELinux ngokuzenzekelayo futhi noma kunjalo, ayizisebenzisi izinsiza.
Mayelana ne-Arch, okungithuse kakhulu ijubane ababuyekeza ngalo izinguqulo zezinto ezibucayi kakhulu, zaze zangenza ngabuyela kuma-Three Marys of solid in GNU / Linux (Debian, Slackware and RHEL / CentOS ).
Kahle u-Eliotime3000 usevele ukuphendulile, kepha njengoba ubona kokuthunyelwe kwami ​​ngifaka nomsizi wokucushwa okuningi: ufw. Lokhu kukuvumela ukuthi ungeze amapharamitha ku-firewall (netfiter noma iptables ... noma yini ofuna ukuyibiza) ngendlela eshesha kakhulu futhi elula: D.
Futhi, ukuthola ukuphepha okwengeziwe, ngokwesibonelo ungafaka i-fail2ban ukuvikela i-pc yakho emizameni eyenziwe yi-ssh noma ezinye izinsiza: D.
Bengifuna ukubeka izandla zami kule distro isikhathi eside, kepha ngicabanga ukuthi ukufaka ngesandla ukuncika kungaba yinto ecasulayo yangempela, noma kunjalo ngiyabonga ngesifundo, mhlawumbe ngolunye usuku ngizojabula.
Wamukelekile. Bona ukuthi ngisuka ezinhlelweni ezizenzakalelayo ukuze ngibe nokulawula okuningi kohlelo nokuncika 😀
I-KISS distro engiyithandayo ... Eqinisweni, yiyona engcono kakhulu ye-KISS distro engiyizamile kuze kube manje, ngoba inenzuzo yokusebenzisa kokubili ama-binaries (njenge-Debian nabanye basebenzisa i-slapt-get noma i-slackpkg ukufaka kusuka kuma-backports) noma ukuhlanganiswa njenge I-Gentoo (sbopkg).
Noma kunjalo, ama-distros afana ne-Slackware, awekho, nezindawo ezisemthethweni zokubuyela emuva (njengeSlacky.eu) zazi kakhulu izimbungulu futhi zivuselele kwinguqulo ezinzile futhi zihlele ikhodi yomthombo.
I-PS: ikwenza ufune ukulanda ikhodi yomthombo we-Iceweasel bese uyifaka nge-sbopkg.
Ngempela: D. Ngendlela .. Usebenzisa yiphi i-distro manje? Ngiyazi ukuthi ubuseduze kweSlackware, iDebian ne-Arch kepha ukuthi yikuphi okhethiweyo wakho ukuqagela noma ngubani 😀
Ukukhuluma iqiniso, i-distro engiyithandayo yi-Debian, ngoba inginikeza ukufakwa okusheshayo nokulula kokusebenzisa nokuzivumelanisa (uma othile ezonda i-terminal, ngifaka isoftware yesikhungo uma kuyideskithophu ye-GTK noma i-Apper uma kuyi-KDE).
Ngasohlangothini lweSlackware, ngiyishiyela ama-PC angaxhasi ama-kernels ane-PAE njenge-Pentium IV yami endala noma ama-PC angasebenzisi iWindows XP.
Noma kunjalo, ngiyethemba ukuthi umfowethu uzokwazi ukuhambisa wonke amafayela akhe kwi-PC yakhe ukufaka iSlackware 14.1 futhi ngenxa yalokho, ukuthi aqhubeke nokujabulela i-XP ngeVirtualBox (wayithanda lapho nje ngiyifaka encwadini yakhe yokubhalela eneWindows 7, ngoba kuya ngezicelo zokuphathelene ama-PIC wohlelo nama-PLC's).
eliotime…. ngixolele ukungazi kwami ​​.. kepha ngokunganaki .. ngingalifaka iphakethe le-.deb… ??????
kungenxa yabashayeli bephrinta bami ..
petercheco .. umhlahlandlela omkhulu wokuphrinta .. futhi ungenze ngafuna ukuzama ukuxega… ngiyabonga kakhulu ..
Uma usebenzisa i-Alien packet converter, yebo; kepha uma ufuna ukusebenzisa i-slackpkg ukufaka amaphakheji we-.deb, cha.
Wamukelekile @patodx 😀
I-ahahaah encane engenangqondo
Ngu? Ngingasho ukuthi ibanzi kepha iyashesha kufaka nesoftware esiyisebenzisa kakhulu 😀
UMeh, okungenani akafaki amanye amaphakheji ongafuni.
Ngempela .. Ngemuva kokuthi ngamunye ekhethe amaphakheji abafuna ukuwafaka .. Mane uwaseshe ku-slackbuilds.org bese uwafaka ngomyalo sbopkg -i "package_name" (uma ingenakho ukuncika) noma i-sbopkg -i "name_of_dependency package_name" (ye faka ukuxhomekeka + iphakethe uqobo) 😀
Ngizamile iSlackware ezinyangeni eziningi ezedlule lapho kuphuma inguqulo 14.0, ukufakwa kwayo bekuhlukile kokunye ukwabiwa kepha hhayi kunzima njengoba abanye abantu bekupenda futhi kwanginika umuzwa wokuvikeleka (ezingeni lamaphakeji asemthethweni) engiwunikwe yimibiko embalwa; kepha ngikuthatha njengephutha nokumosha isikhathi ukungakwazi ukufaka ngokuzenzakalela uhlelo olunesisisekelo kunazo zonke noma lube ne-kernel eyenziwe kahle kakhulu futhi ngaleyo ndlela sinciphise isikhathi sokulayisha. Yebo, abaningi benu bazongitshela ukuthi ngingawenza ngesandla ekufakweni, kepha yilokho kanye engikugxekayo: ukunquma ngamaphakeji angaphezu kwe-100 uma ngizokufaka noma cha.
Imvamisa, isifaki seSlackware sizokukhombisa uhlu lokuthi yiliphi iqembu lamaphakeji ofuna ukuwafaka (kusuka kokuyisisekelo kuya kokunqunyiwe, njengamaphakheji womdlalo we-KDE), kepha ukukhuluma iqiniso, i-kernel boot isesistimu. boot elifana ngokwanele ne-UNIX / BSD (empeleni, i-OpenBSD ithatha unomphela kubacibisheli).
Angikwazi ukuvuma okuningi .. Ungafaka amaqembu wesoftware A, AP, D, F, K, L, N, X futhi usuvele unohlelo lwesisekelo lapho ngemuva kokuqalisa kabusha ufaka noma yini oyifunayo: D.
Okuthe xaxa ngalokhu: http://www.slackwiki.com/Minimal_System
Umhlahlandlela muhle, yize ngibona ukuthi ukuxega kusebenza kanjani, ngicabanga ukuthi ngingumsebenzisi we-Arch kakhulu.Onye into engishikayo ukuthi unamaphutha amaningi esipelingi (ikakhulukazi izenzi ezilula ezidlule ngaphandle kokugqamisa). Ngicabanga ukuthi yinto ehlala ithathwa kalula kepha noma yiliphi ikhasi lekhwalithi kuzofanele libone lawo maphutha. Ngiyethemba ukuthi kusuka eLinux bafaka umzamo omkhulu kulokho.
U- @ Petercheco uvela eCzech Republic, ngakho-ke ngeke umsole njengalokho ngokuba nesipelingi esibi kanjalo (empeleni, kwesinye isikhathi ukubhala ngezilimi ezimbili noma ngaphezulu kuyakhathaza).
Noma kunjalo, ukuthi i-athikili iphelele kakhulu kunami, kufanele ikhredithi eyengeziwe.
Ngingumsebenzisi we-Debian kepha ngizamile ukubona cishe konke ukusatshalaliswa, okungenani konke okwangempela okuvela kukho konke okunye. Phakathi kwazo, iSlackware yiyona engiyithanda kakhulu, ukusebenza kwama-slackbuilds ekuqaleni kungaba nzima kepha akufani nokusetshenziswa kwe-AUR ku-ArchLinux.
I-Slackware efana ne-Debian ihlose ukuzinza kakhulu noma ngabe inguqulo yakamuva uma ingeyona i-bug free, yingakho cishe kuphela ukusatshalaliswa okusasebenzisa uLilo esikhundleni se-grub njenge-boot loader.
Kubonakala kimi ukusatshalaliswa okuhle kakhulu, uma 'ngiya' kusuka kwaDebian bengizowela kumanethiwekhi weSlackware, ngoba iGentoo inzima kakhulu ukuyisebenzisa
Yebo, kuliqiniso ukuthi ngizoba nokunye ukupela amagama, kepha yilokho okwenzekayo lapho umuntu ebhala udaba ngo-12: XNUMX ntambama eCzech Republic: D. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukukhumbula ukuthi izikhulumi ezifanayo zaseSpain zenza amaphutha okupela isipelingi: D.
Ngiyavuma. Oi en dya abantu ababhali vien, zon hunos berdaderos hanimales welenhua casteyana.
Ngicabanga ukuthi uPetercheco kufanele abhale kusukela manje ngolimi lwesiCzech, ngakho-ke sizoqonda kangcono ukuthi umngani wethu usho ukuthini kwizifundo, ngoba iSpanishi akulona ulimi lwakhe lwendabuko.
Ukuphawula kwakho kwenze intambama yami emsebenzini yajabula: D. Ngiyabonga :). Ngizimisele uma ngithi, ukuthi ngihleke imizuzu eyishumi minutos
OKUNYE OKWENGEZIWE ..
Hos ngincoma engxenyeni yokulungiselelwa kokugcina ukuze uncomment ukuphumula kwe:
Lokhu kuvela kuqala embhalweni: D. Uma kwenzeka inqolobane yamazwe ahambelana nayo yehluleka.
Ngivumelana ngokuphelele nale ndatshana yeSlackware, kepha, ngaba nezinkinga lapho ngilungisa inethiwekhi yami yeLan, angitholanga ndawo, izixazululo zenkinga yami yenethiwekhi, ngakho-ke, sengibuyile ku-openuse, esiza futhi okuningi ukumiswa kweLan. Ngihalalisela labo abafuna futhi abanesikhathi sokufunda, kepha njengomsebenzisi ngifuna izixazululo ezisheshayo, angitholanga iSlackware.
Ngesikhathi senqubo yokufaka, isifaki siyabuza ukuthi ngabe ufuna ukumisa inethiwekhi. Uthi yebo bese ukhetha inketho ye-Network Manager. Qaphela, kunezinketho ezine futhi enye yazo i-DHCP. Ungakhethi i-DHCP uma kungenjalo iMenenja yeNethiwekhi. Inkinga elungisiwe njengoba ukuxhumana kwakho kwenethiwekhi kuzophathwa yi-Network Manager 😀
Imininingwane engaphezulu, ongayithakasela:
Ngifake i-slackware ku-Nec Versa M320 ngalandela imiyalo yakho, ikakhulukazi i-sbopkg -i "kcm_touchpad" kepha iphedi yami yokuthinta ayisebenzi.
Ngibhekabheke kodwa angitholanga sisombululo se-slack 14.1.
Ngabe kufanele ngihlele ifayela le-x11 ngesandla?
Sawubona, lapho ufaka iphakheji elishiwoyo uzothola izinketho zokumisa iphedi yakho yokuthinta kuzintandokazi zohlelo lwe-KDE -> amadivayisi wokufaka -> iphedi yokuthinta.
Lapha uyilungisa ngokwezidingo zakho: D.
Uma esikhundleni sokusebenzisa i-KDE usebenzisa i-XFCE iya esikhungweni se-xfce -> igundane nephedi yokuthinta bese wenza amasethingi owafunayo :).
Isistimu ayitholi iphedi yami yokuthinta. Lapho ngifaka ukucushwa kwephedi yokuthinta kusuka ku-kde, ekwazisweni kungitshela igama le-Touchpad: Idivayisi ayitholakali
Ngilangazelela kakhulu icala lakho .. Iphedi yokuthinta ayisebenzi ngokuphelele noma isebenza uhhafu? Ulufake kanjani uhlelo?
Akukho lutho olusebenzayo. Ukufakwa kwenziwa ngokulandela lesi sifundo.
Uyazi ukuthi yini okufanele uyenze ukubheka ukuthi i-kernel ilayisha iphedi yokuthinta?
Kepha angikhulumanga ngokufakwa .. Okuthunyelwe kwami ​​kumayelana nokufakwa ngemuva: D.
Iphedi yakho yokuthinta kungenzeka ukuthi ayisekelwa, kepha ngiyaqala ngqa ukuyibona :). Uma ufake iqembu lephakheji X ngesikhathi sokufakwa, iphedi yakho yokuthinta kufanele isebenze kahle.
Ekufakeni iSlacware kuvela umzuzwana lapho ekubuza khona ukuthi iyiphi igundane ofuna ukulisebenzisa. Kufanele ukhethe okuzenzakalelayo Vídně: imps2mouse.
Uma ufuna ukwenza ukucushwa okwenziwa ngesandla, kufanele uhlele noma wakhe ifayili / usr/lib/X11/xorg.conf.d/10-synaptics.conf
itshe lesihlabathi kusho
Umnikelo omuhle kakhulu, bengingasebenzisi i-slackware iminyaka, ngalokhu kusatshalaliswa engikuqale ku-GNU / Linux ngohlobo lwe-10, bekufanele ngiyishiye isikhathi eside ngoba ngaphambi kokuthi ngidinge ukufaka konke ngesandla futhi bekufanele ngibheke ngakunye kokuncika, kepha hey ngizo izame futhi, Siyabonga Ngesiqondisi
Okuthunyelwe okuhle kakhulu; lapho kuningi futhi kungcono, ungahlala ufunda izilungiselelo ezingahle zingabi kwezinye izifundo futhi okuphambene nalokho.
Okuthile okugqamile ku-Slackware ukuhlanganiswa kwe-KDE kanye nokushisa okusetshenziswa yizinhlelo zokusebenza, futhi yebo, ngakubona futhi kushesha ukwedlula i-Archlinux.
Into yokusebenza, ngingakubeka embuzweni, kuthiwani ngoGentoo?
Ngizokunikeza i-vs ye-CentOS yami ene-kernel yangokwezifiso vs Slackware ene-stock kernel ... ake sibheke inqama, isivinini nokuzinza ngokumelene nokucindezela kwe-CPU othola inzuzo enkulu more
Kulungile, faka imishini emibili ebonakalayo .. Enye ene-CentOS encane ne-kernel yakho yangokwezifiso kanti enye ine-Slackware encane (faka amaqembu esoftware abe nokufakwa okuncane kweSlackware: http://www.slackwiki.com/Minimal_System) bese ushicilela imiphumela yakho 😀
i-athikili enhle kakhulu, siyakuhalalisela, bengivele ngifuna ukuhlola le distro, futhi ukwazile ukungitholela ukuthi ngehlise i-ISO ngokushesha.
Umbuzo nje omncane, ngizowufaka emshinini wami wokuhlola, lapho ngifakwe khona amanye ama-distros amaningi, uDebian Jessie, i-Arch, Ubuntu 14.04, i-OpenSuse, i-KaOs, i-Trsiquel, futhi onke avela ku-GRUB2. Ngiyabona ukuthi esihlokweni sakho ukhuluma ngoLilo (ineminyaka emingaki leyo?).
Umbuzo uwukuthi, ngingakhetha ukufaka i-GRUB2 esikhundleni se-lilo futhi ngiyazise amanye ama-distros osuvele uwafakile?
Sawubona Essaú futhi ngiyabonga ngokuphawula kwakho: D. Ngesikhathi sokufakwa isistimu ifaka i-Lilo ngokuzenzakalela.
Ungafaka i-grub (grub2) eza kwi-Slackware DVD ngezinyathelo ezilandelayo:
Uma usuqedile ukufaka iSlackware futhi lo mlayezo uyavela: "Ukufakwa kweSlackware Linux kuqediwe."
ukufaka-grub-ukufaka / dev / sda
Futhi voila: D .. Imininingwane engaphezulu ngalokhu:
Into eyodwa ...
ILilo akuyona iphrojekthi elahliwe nhlobo. Uhlobo lokugcina oluzinzile lwakhishwa esikhathini esingaphansi konyaka odlule (Juni 7, 2013) kanti namuhla iSlackware isekelwa yi-UEFI noLilo.
Imininingwane engaphezulu: http://en.wikipedia.org/wiki/LILO_%28boot_loader%29
umhlahlandlela omuhle uPeter.
ngakolunye uhlangothi, ngemuva kwezinyanga uyazisola ngokunenqena futhi abuyele e-rhel, yize kulokhu kuma-centos kodwa ngo-7 😛
Ngiyabonga: D. I-hoigo ihlebela emoyeni abathi, ukuthi ngihlala neSlackware, ngoba ngiyithanda kakhulu futhi nginakho konke ezandleni zami :). Ngaphezu kwalokho, ukusebenza kunesihluku futhi ngiyakhohlwa ngama-repositories kanye nokumiswa kwezinto eziza kuqala, i-deb noma i-rpm package kanye nokuncika kwabo: D. Ngomama uSlackware ngizizwa ngikhululekile futhi ngiya ngokuya ngikhomba ukucabanga kukaPatrick Volkerding mayelana ne-linux namuhla.
Kuhle futhi ukusekelwa enakho akunakuqhathaniswa:
Chicxulub Kukulkan kusho
Umbuzo owodwa: ngingawafaka yini ama-desktops amabili noma ngaphezulu? Isibonelo, qala namuhla nge-KDE, kusasa nge-XFCE nangesonto elizayo neCinnamon.
Phendula kuChicxulub Kukulkan
Sawubona, impela ungaba nemibhalo eminingana .. Vele, iCinnamon kuzofanela ihlanganise: D.
Imininingwane engaphezulu lapha: http://slackblogs.blogspot.cz/2014/04/cinnamon-slackbuilds-csb-for-slackware.html
Isifundo esihle kakhulu, bengisebenzisa iSlackware kusukela ngo-1998 futhi angikaze ngibe nezinkinga ngamaseva, angiwafakeli amaphakheji kusuka kuma-slackbuilds kuwo ngoba amaphakheji asezinqolobaneni ezisemthethweni anele. Endlini yami ngiyayisebenzisa futhi kulokhu uma ngisebenzisa ama-slackbuilds amaphakeji afana ne-vlc, yize ngisebenzisa njalo i- ./configure && make & make install phakathi kwabanye.
Siyakuhalalisela futhi ngalesi sifundo nangokukhetha okwenzile!
Ngiyabonga kakhulu Oscar, ngiyajabula futhi ngokuthi ngithathe isinqumo sokusebenzisa iSlackware. 🙂
Wow, kufanele ube ngumphangi :).
Uma uthuthuka usuka kuslackware uye kolunye uhlobo, ingabe uyaphinda ufake noma uyathuthukisa?
Ungathuthukisa ngaphandle kwezinkinga nge:
1 ° Faka ukuphumula kwenguqulo entsha ku / etc / slackpkg / mirrors
Isibuyekezo sesibili nge:
ukubuyekezwa kokuhlolwa kwe-slackpkg
Khetha uhlamvu K ukugcina ukucushwa kepha ubheke ukucushwa okusha kwamaphakeji
I-3 slackpkg ukufaka okusha
Vele, ngincamela ukwenza ukufakwa okuhlanzekile ngoba iSlackware isebenza kahle kakhulu futhi akudingekile ukuthi uvuselele njalo ngamabili ngamathathu kusuka enguqulweni kuye enguqulweni 😀
I-Slackware, kuhle, ngifunda okuningi!
Umbuzo, lapho ngiguqula /etc/profile.d/lang.sh ngifaka:
thekelisa LANG = es_XX.utf8
thekelisa uLIMI = es_XX.utf8
thekelisa i-LINGUAS = es_XX.utf8
thekelisa i-LC_ALL = es_XX.utf8
XX: izwe elihambelanayo
Ikhibhodi iyinkinga, ayithathi ikhibhodi yesiLatin American noma iSpanishi (uyabona ukuthi angikwazi ukubhala), ngakhetha i-olpc / es-olpc | olpc / es-olpc.map lapho ngesikhathi sokufaka iphendule, khona-ke cha. Ingabe ingalungiswa kuma-slackbuilds? Yini ebengidinga ukuyichaza ekufakweni? Yini okufanele ngiyiguqule? Ozithobayo.
Zama ukuvula i-terminal ngaphandle kokuba yimpande (okungukuthi, ngegama lakho lomsebenzisi) bese ubhala:
Imininingwane engaphezulu: http://docs.slackware.com/howtos:window_managers:keyboard_layout
Ngokuvamile, ikhibhodi ingalungiswa ngqo kwimvelo yedeskithophu oyisebenzisayo.
Uthe usethe /etc/profile.d/lang.sh, kepha usetha /etc/profile.d/lang.csh futhi?
thekelisa LANG = es_ES.utf8
Isebenziseka Kakhulu: 3
Siyakuhalalisela ngalo mnikelo emphakathini wasePetercheco slacker.
Bengilokhu ngisebenzisa i-slackware kusukela nge-slackware 13 futhi iqiniso ukuthi kuyinto engcono kakhulu engibe nayo kwi-hard drive yami, ngizamile abanye kepha ngihlala ngibuyela kwi-slackware (Gentoo ngiyayifuna) futhi manje ukuphela kwento engicabanga ngayo izinzile noma eyamanje?
Ukuphela kwento engibona ilahlekile umphakathi okhuluma iSpanishi ku-irc ngokwesibonelo noma inkundla enhle esebenzayo enokubamba iqhaza okuningi. Ukuxazulula ukungabaza kwawo wonke umuntu, sonke kufanele sifunde futhi kulungile ukungalungi izikhathi eziyi-100, ngakho-ke abantu bazolahlekelwa ukwesaba le Gnu / linux distro emangalisayo.
Lokhu kwenzeka kimi lapho ngibona ukuthi abantu basebenzisa ithuba lokuhalalisela umbhali nalokhu okuthunyelwe futhi ngendlela abalahla ngayo noma yikuphi ukungabaza, kungakuhle ukuthi sibe nendawo ukuze sonke sabelane ngokuhlangenwe nakho kwethu futhi sifunde kabanzi futhi kungadingeki siphonse okuningi (linux imibuzo).
Umuntu ophakeme kakhulu ubuze ukuthi kungani i-sbopkg noma i-slackpkg ingangezwanga, impendulo ilula, zingamaphakheji wokuzikhethela ngakho-ke yephula ifilosofi ye-KISS ngesizathu esifanayo i-slackware64 ayinakho ukuhambisana nama-32bits, "ilungile" kepha kufanele ungeze ungqimba lwesoftware ukusebenzisa / ukuhlanganisa isoftware engama-32-bit.
Omunye umsebenzisi ubuze ukuthi ungashintsha kanjani kusuka ku-kde uye endaweni ehlukile, ngoba njengoba uPetercheco ethe ihlanganisiwe bese usebenzisa i-terminal: $ xwmconfig
Futhi imenyu ivela lapho ungakhetha khona oyifunayo (efakwe ngaphambilini). Ngemuva kwalokho sicisha i-X, $ startx ngokulandelayo bese kuba yilokho.
Ngiyabonga kakhulu ngokunikeza impendulo yakho nangokuhlola okuthunyelwe yimi futhi ngiyavuma, amawebhusayithi amaningi akhuluma iSpanish mayelana neSlackware ayadingeka: D.
Wamukelekile uPetercheco, uma kudabukisa ukubona ukuthi akekho umuntu ku- # slackware-es de freenode, ungakha isiteshi esihlukile, njengeSlackeros noma iSlackos noma elinye igama, into enzima ngalezi ziteshi ze-irc ukuzigcina zisebenza futhi zinabasebenzisi abaningi ... .
Ngaphezulu ngafaka * i-Slackpkg futhi kwakusho ukutholwa nge-slaptp ngoba i-slackpkg ifakiwe.
Ngiyabingelela futhi ngiqhubeke nokunikeza umoba ku-slackware iminyaka eminingi eminye!
Sawubona Petercheco 🙂
Ngikuthandile lokhu okuthunyelwe okufanele ngikwenze ngemuva kokufaka iSlackware. Ifaneleke kakhulu kuwo wonke umuntu othanda ukuzama nokuhlola i-OS * Linux.
Bengilokhu ngisebenzisa iSlackware kusukela ngo-1994. Ngihlala ngine-Slack ekulungele ukuhamba; njengamanje iSlackware 14.1.
Kodwa-ke, angikaze ngiyisebenzise izinyanga ngoba ukwesekwa kwekhadi le- "nVidia Optimus" bekungavuthi kangako njengoba bengizodinga iSlack.
Ngidinga ukufaka amaphakheji we- "bumblebbe ne-bbswitch" ukuze ikhadi le-nVidia linqanyulwe; ngoba isikhathi esiningi ngishiye i-Intel edidiyelwe ye-i7.
Ngenxa yokuthunyelwe kwakho ngikhumbule okuthile engingazange ngikunake okokugcina lapho ngizama ukufaka la mapakeji: «okungahambelani nezingcezu ezingama-32 !!»
Ngisanda kusesha ngathola le HOWTO echaza ukuthi ungakufaka kanjani ukwesekwa kwamakhadi we-nVidia Optimus anezishayeli ze-nVidia; kepha ... kusabalulekile ukuguqula uhlelo lube "multilib"; futhi yilokhu engingazizwa ngathi!
Uma ngine-Slackware Linux eyi-64 emsulwa; yingoba ngifuna kube njalo. Ukungeza isendlalelo sokuhambisana kwe-32-bit kubonakala kungalungile kimi.
Ngiyazi ukuthi inkinga eyisisekelo ukuthi i-nVidia ayinikeli ukwesekwa okwanele kwamakhadi ayo emidwebo ezindaweni ze-GNU / Linux.
Kuzofanele ngilinde uhlobo oluthile lokusekelwa, ngisho nangaphandle, oluvumela ukufakwa kwale software ngaphandle kokwenza uhlelo lwe- "multilib".
Ngiyabonga ngokungikhumbuza 🙂 Angikaze ngiqale i-Slack izinyanga ngoba ngeLinux Mint 17 ukuxhaswa kwe-nVidia Optimos sekuvele kusebenza (nabashayeli be-Noveau) kusuka ekufakweni futhi kunethezekile kangangokuba umuntu ugcina ekhohlwa lapho evela khona: - /
Ikhasi elihle kakhulu!
Abasebenzisi abaningi bayajabula ngeSlackware !!! 🙂
Izithombe zakho zizobukeka zingcono nomphathi wewindi onjenge-Enlightenment 16 😀
Ngiyabonga kakhulu mngani… bengigxuma ngisuka kwi-distro ngiya kwi-distro isikhashana, kepha sengibuyile eSlackware nge-KDE. Vele, kulokhu iSlackware yamanje futhi ngicabanga ukuthi iSlackware 14.2 noma i-15 sizoyibona, kubonakala ngathi isizokwenza i-caramel: D.
Indatshana enhle kakhulu ye-petercheco!
Bengingakaze ngisebenzise le distro kuze kube namuhla, bengilokhu ngakhetha abanye ngesifaki sokuqhafaza futhi abanobungani ngokwasezincwadini maqondana noshintsho phakathi kwamawindi ne-Gnu / Linux, kepha kuyangimangaza ukusebenza kweSlackware, ngisadinga ukumisa ezinye izinto ezibalulekile ezifana nekhibhodi nezinto, kepha angicabangi ukuthi ziyinkimbinkimbi.
Engizisola ngakho kuphela ukuthi kuthathe isikhathi eside ukuzama lo msebenzi wobuciko.
Ukubingelela nokuhalalisela i-athikili enhle, kuwusizo olukhulu.
Sawubona mngani futhi ngiyabonga kakhulu ngesilinganiso esihle sendatshana yami :). Ngiyajabula ukubona ukuthi kuyasiza kubasebenzisi :). Ukubingelela futhi ujabulele i-distro ...
Sawubona BANGANI NGIMUSHA KWISLACKWARE UNGANGISIZA UKUFAKA ISIBANI… NGICELA SIBONGE
Lokhu kukusiza: http://www.slackware.com/~mrgoblin/slackware-lamp.php
Ngiyabonga kakhulu Peter.
Ubhale iposi elihle lalabo abasha kuslackware. Kungisizile kakhulu futhi ngisebenzisa i-distro kusukela ngo-2008.
Into enhle nge-slackware ukuthi ayishintshi kakhulu ngaphandle kokuthi kunesidingo. Manje sekukhona ukukhishwa okusha, i-slackware 14.2. Ngabe silinde iposi elisha lokushaja?
Ngiyabonga ngokuthunyelwe, kungisizile njengoba ungeke ucabange.
Ngimusha kule distro, ngifunde kuLinuxQuestion ukuthi i-KDE Plasma 5 ingafakwa kuSlackware 14.2.
Engingakuqondi ukuthi ngingayifaka kanjani?
Ngikusebenzisa kanjani okugciniwe kwe-AlienBob?
Ngize lapha ngenhlanhla, lesi sifundo singisize kakhulu ngoba bengifuna ukuzama iSlackware.
Kuze kube namuhla ngisayifakile kudeskithophu yami ye-pc ngaphandle kokwehluleka, ukuzinza, ukudlula okukodwa. Futhi njengamanje ngisanda kuyifaka kukhompuyutha ephathekayo ukuze ingene ijule emhlabeni we-linux ikakhulukazi (iSlackware / Zenwalk)
Kuyiqiniso ukuthi ekuqaleni bekunzima, into efana nokuthi ngisuka nini emafasiteleni ngaya ku-ubuntu / linuxmint ... hahaha.Kwakumele ngenze ucwaningo oluningi nge-linux.
Ngangizame ama-distros amaningi, kepha lokhu kimi yikho okuzivumelanisa nokufunda kwami ​​nge-linux. Ngisenayo enye evela esikoleni esidala okuyiFreebsd.
Ngabe kukhona owaziyo ukwenza ukusatshalaliswa kwesiko kwe-Slackware? Ngiphenya i-liveslak kepha angazi ukuthi yimiphi imiyalo ..
Ngemuva kweminyaka eyi-12 yokulingwa nephutha ngokusatshalaliswa okuhlukahlukene, i-linux, i-bsd, amawindi, i-osx, ngithole uhlelo olungisebenzelayo, ngihlala ngixosha imishini yamakhasimende ukufaka izinhlelo, ukuthuthukisa, ukuhlola, bengidinga okuthile okuzinzile, ngiya ngosuku lwesibili lwe-slackware nokufunda, konke kwaqala nge-wifislax engiyibone ngokushesha okukhulu lapho ngibheka ngiyabona ukuthi ibisuselwa kuslackware ... ngibe sengifunda imibono yabasebenzisi bawo wonke amazinga kanye nokuhlangenwe nakho kwabo ... ngezwa i-adrenaline ukusesha kuphelile.
iforamu enhle ngiyishiya njengeyokugcina,
Sebenzisa i-Force, uLuka!
Cishe unyaka ngemuva kokushona kweGoogle Reader Yikuphi abafundi be-RSS online esisele nabo?
I-Classic Theme Restorer: Ukubuyela kusixhumi esibonakalayo se-Firefox